WARBIXIN: Kadib In Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah & Luka Modric Ay Iskugu Hadheen Abaal Marinta Xidiga Yurub, Wax Ka Ogow Codkii La Kala Helay, Maqnaansha Messi Oo Dood Dhaliyay Iyo Sababta Ay Abaal Marintan Ugu Qalman. – GOOL24.NET
WARBIXIN: Kadib In Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah & Luka Modric Ay Iskugu Hadheen Abaal Marinta Xidiga Yurub, Wax Ka Ogow Codkii La Kala Helay, Maqnaansha Messi Oo Dood Dhaliyay Iyo Sababta Ay Abaal Marintan Ugu Qalman.
Xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay saddexda xidig ee ku tartamaya abaal marinta xidiga sanadka ee qaarada Yurub ugu fiican ee Abaal marinta Player of the Year 2018 iyada oo liiska saddexda musharax uu Lionel Messi ka maqan yahay.
Dooda ugu wayn ayaa noqotay in Lionel Messi uu ka maqan yahay liiska saddexda musharax ee sanadkan u tartamaya abaal marinta xidiga sanadka ee qaarada Yurub ugu fiican ee ay UEFA bixinayso waxaana jira cadaymo la soo bandhigay iyo waliba dooda oo sii xoogaysatay.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa xogta sababta ay Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah iyo Luka Modric ugu qalmaan in ay abaal marintan ku tartamaan iyada oo sidoo kale aanu eegi doono dooda ah in Lionel Messi uu isna u qalmay in uu abaal marintan markale u tartamo.
UEFA ayaa markii ay shaacisay musharixiinta saddexda ah ee Luka Modric, Cristiano Ronaldo iyo Mohamed Salah waxay mid kasta ku soo hoos qortay sababta uu liiskan uu ugu soo baxay taas oo ah waxa aanu doonayno in aanu ku bilawno warbixintan iyada oo kadib aanu eegi doono codbixintii guddida UEFA iyo qaabkii loo kala helay.
Halkan kaga bogo warbixinta oo faah faahsan iyada oo aanu ku bilaabayno sababta ay UEFA ku salaysay in Modric, Ronaldo iyo Salah ay liiskan iskugu soo hadheen.
1-Luka Modrić (Real Madrid & Croatia)
Sababta Uu Liiska Saddexda Musharax Ugu Soo Baxay Ee UEFA Bixisay: “Waa guulayste UEFA Champions League ah, waa u tartame kaalinta labaad ee koobka aduunka ah, waxa uu gudoomay kubbada dahabka ah ee FIFA Golden Ball”.
Waxayna UEFA Sidoo kale soo bandhigtay wax qabadkii shaqsiga ahaa ee uu Luka Modric ka sameeyay waqtiga la qiimaynayo waxaana qiimaynta lagu soo koobay Champions League iyo kulamadii maxaliga ahaa ee dalka Spain.
Kulamada Maxaliga Ah Ee Spain
2-Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus & Portugal)
Sababta Uu Liiska Saddexda Musharax Ugu Soo Baxay Ee UEFA Bixisay: ” Waa ku guulayste UEFA Champions League ah oo rekoodh markii shanaad ah, waa gool dhaliyihii ugu sareeyay ee UEFA Champions League xili ciyaareedkii lixaad”
Waxa kale oo xogta Ronaldo lagu soo xushay lagu soo koobay wax qabadkiisii xili ciyaareedkii la soo dhaafay ee kooxdiisii hore ee Real Madrid oo iskugu jira Champions League iyo kulamada maxaliga ah:
3-Mohamed Salah (Liverpool & Egypt)
Sababta Uu Liiska Saddexda Musharax Ugu Soo Baxay Ee UEFA Bixisay: “ U tartame kaalinta labaad ee UEFA Champions League, rekoodho badan jabiye xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Liverpool”.
Men’s Player of the Year nominee: Mohamed Salah
Kulan: 13 (oo laga reebay kulamadii play-offka)
Kulamada Maxaliga Ahaa Ee England
Haddii aynu intaas ku soo dhaafno xogta iyo sababta ay UEFA saddexdan xidig ugu soo saartay liiska kooban ee mid ka mid ahi uu ugu guulaysan doono abaal marinta xidiga sanadka ee Yurub ugu fiican aan soo qaadano liiska tobankii xidig ee kaalmaha kale soo galay iyo waliba dhibcihii ay kala heleen.
Antoine Griezmann ayaa kaalinta afraad galay isaga oo helay 72 dhibcood wuxuuna si wayn uga sareeyaa Lionel Messi kaalinta shanaad ugu jira 55 dhibcood hlaka da’yarka France ee Kylian Mbappe uu kaalinta lixaad ugu jiro 43 dhibcood.
Raphaël Varane oo France kula soo guulaystay koobka aduunka isla markaana Real Madrid la soo qaaday koobka Champions league oo ay ahayd in uu ka mid noqdo xidigaha abaal marintan ku tartamaya ayaa kaalinta 8 aad ugu jira 23 dhibcood oo kaliya isaga oo xataa lahaa muhiimada Ronaldo iyo Modric ee Real Madrid isla markaana kaga horayn lahaa ku guulaysigii koobka aduunka.
Eden Hazard oo xulka qarankiisa Belgium la soo gaadhay kaalinta saddexaad balse Chelsea kula soo gulaystay koobka FA Cupka oo kaliya ayaa kaalinta 9 aad ugu jira 15 dhibcood waxaana tobanka xidig ee liiska saddexda musharax ku soo xigay dhamaystiray Sergio Ramos oo helay 12 dhibcood oo kaliya.
Halkan Kaga Bogo Dhibcihii ay Kala Heleen Tobanka Xidig ee Ku Soo Xigay saddexda musharax ee iskugu soo hadhay abaal marinta xidiga sanadka ee Yurub ugu fiican:
4 Antoine Griezmann (Atlético & France) – 72 Dhibcood
5 Lionel Messi (Barcelona & Argentina) – 55 Dhibcood
6 Kylian Mbappé (Paris & France) – 43 Dhibcood
7 Kevin De Bruyne (Manchester City & Belgium) – 28 Dhibcood
8 Raphaël Varane (Real Madrid & France) – 23 Dhibcood
9 Eden Hazard (Chelsea & Belgium) – 15 Dhibcood
10 Sergio Ramos (Real Madrid & Spain) – 12 Dhibcood
Laakiin jamaahiirta kooxda Barcelona oo adeegsanaya xogta xili ciyaareedkii hore laga ururiyay ciyaartoyda kooxaha Yurub ayaa cadho kala dul dhacay UEFA kadib markii ay arkeen Lionel Messi oo ka wax qabad fiicnaa dhamaan xidigaha saddexda ah ee Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah iyo Luka Modric.
Waxayna soo qaateen Xogtan Oo Ay Shirkadaha Xogta Ururiyaa Shaaciyeen Dhamaadkii xili ciyaareedkii hore:
1- Gool dhaliyihii Ugu Sareeyay Ee La Liga oo lahaa 34 gool iyo in uu koobka Horyaalka Barca kula soo guluaystay.
2- Gool caawiyihii ugu sareeyay ee La Liga inkasta oo lala wadaagay wuxuuna sameeyay 12 gool caawineed.
3- In uu abuuray fursadii ugu badnayd oo 87 ah ee La Liga, 6 darbo oo laga xorta ah uu dhaliyay, in 197 darbo oo goolka ah uu sameeyay iyo in saddex koob uu Barcelona kula soo guulaystay intii aan liiska musharixiinta la soo saarin.
Laakiin dhamaan qodobadan iyo kuwo badan oo ay jamaahiirta Barcelona soo bandhigeen ayaan waxba ka badali karin liiska musharixiinta saddexda ah ee ay UEFA Soo xulatay iyada oo waliba ay dood kale ka taagan tahay sababta Mohamed Salah oo aan hal koob ku soo guulaysan uu liiskan ugu soo baxay ee Messi oo ku soo guulaystay La Liga, Copa Del Rey iyo Spanish Super Cup aanu liisan ugu soo bixin.
Waxaana muuqata in xogta Modric iyo Mahamed Salah uu Lionel Messi kaga fiican yahay xili ciyaareedkii hore balse guddida khubarada ahaa ee UEFA ay u saartay soo xulida iyo kala saarida liiskii ciyaartoyda abaal marintan u tartamayay ayaa go’aamiyay in Messi aanu meel ku lahayn liiska saddexda musharax.
Laakiin xaqiiqda marka laga hadlayo Mohamed Salah ayaa soo sameeyay wax walba oo fiican oo uu ciyaaroy ka samayn karayay heerka shaqsi wuxuuna hadda si toos ah ula tartami doonaa Ronaldo iyo Modric oo Champions League kaga soo guulaystay finalkii uu dhaawucu soo gaadhay.
Aragtida Sida Ay Ukala Guulaysan karaan Ronaldo, Modric iyo Salah:
Marka xaqiiqda laga hadlayo marka la eego saddexda musahrax ee Ronaldo, Salah iyo Modric, waxaa abaal marintan inta ugu badan u qalma Luka Modric kaas oo Ronaldo la’aantiis aanu liiskan ka soo muuqdeen maadaama oo uu ahaa mishiinkii dhaqaajinayay markii uu Madrid joogay.
Luka Modric oo sidoo kale loo doortay xidigii koobkii aduunka ugu fiicnaa ayaa xulka qarankiisa Croatia markii ugu horaysay gaadhsiiyay finalka koobka aduunka, wuxuuna u qalmaa in uu ku guulaysto abaal marinta xidiga sanadka ee Yurub ugu fiican.
Laakiin haddii ay noqoto bandhiga shaqsiga ah ee ay abaal marintani u taagan tahay waxaa inta ugu badan u qalma Mohamed Salah kaas oo ahaa xidigii ugu saamaynta badnaa xili ciyaareedkii la soo dhaafay qaarada Yurub marka ay noqoto wax qabadkiisii Premier league iyo Champions League.
Laakiin saamaynta guud ee kooxahaaneed marka ay noqto Cristiano Ronaldo ayaa abaal marintan inta ugu badan u qalma isaga oo waliba goolasha ugu badan ka soo dhaliyay koobka kaliya ee uu ku soo guulaystay xili ciyaareedkii dhamaaday ee Champions league.
Waxayna u muuqataa in mid kasta oo ku guulaysta Ronaldo, Modric iyo Salah uu noqo doono mid u qalma abaal marintan balse codka ayaa go’aamin doona xidiga la gudoonsiin doono abaal marinta xidiga sanadka 2018 ee Yurub ugu fiican.
Haddaba akhrise, marka aad xogan eegto isla markaana aad barbar dhigto khibrada aad u leedahay kubbada cagta iyo wax qabadkii xili ciyaareedkii hore ee saddexdan xidig, ciyaartoygee ayaad filaysaa in uu inta ugu badan u qalmo ku guulaysiga xidiga sanadka ee yurub ugu fiican?.
11 Fekradood ayaa laga dhiibtay warbixintaan
Abdicasiis abshir says:
Ronald ayaan u arkaa wayo champion ayuu 3jeer oo isku xaga Ku guulaystay .goolasha ugu badana rikoodh ka haystaa
marka hore batalaalow waad mahadsan tahy mar labadka hadaan u galo fikirkayka kolay waynu ku kala aragti duwan nahay qodobna aan ku saxee abaalmarintan koob aduun iyo mid horyaal laguma qiimeeyo malaa adoo cadhysan baad soo qortee waxa lo eega ninki ugu wax qabadka wangsanaa ucl ninkaasina waa cr7 isagaana real keenay semi finalka kulanki bayern mooye inta kale isagaa garbihiisa ku waday naadiga
sababta aanu messi 5 hore ugu qalmina wxa weeye messi wuu ku fashilmay inuu naadigisa wx u taro uclkii
kaalmahn baana loo kala galayaa
abaalmarinti 5aad ee uefa award ah bisha aktoobarna abaalmarintiisi 6 ee ballon dor
cr7 dhaskuu kaga tagy messi gaabne
zakki apdi says:
Luka Modric. ayaa ah kan ugu dhow oo hanan kara laacibka ugu wanaagsan Europe.
Waxan Leyahay Waxa U Qalma
Saalah ayaa u qalma hadaan fikirkeyga idin la wadaago sababtoo hada looma tartamaayo koox koox ee waa shaqsi shaqsi waxqabadkaaga shaqsiga ah
Mohamed one deriction says:
Mohamed salah baa noqon doona guulayztaha zanadkan madama halka koob ee ronaldo kuso shaqataygay isago jooga anu ciyar ku qaden wana ninkii ugu samaynta badna qarada yurub sanadkan
Ani waxaan qabaa inuu mohamed salah kaga haboonyahay ronldo iyo mudric sababtoo asagaa kasaamén badnaa shaqsi ahaan
Luka modric Ayaa uqalma
Ahmed Abdi ibrahim says:
Waad mahdsan tahay sxb ugu horayn waxaan ahay taageere real madrid laakinse runta inaan qorro ayaan rabaa markaan qiimeeyey xili ciyaaredkii lasoo dhaafay
markaan qiimeeyey qiimaynta halkan ku xusan waxaan odhani karaa waxaa uqalma #mohamed salah sababtaan ku doortay qiimaynta kadib waa xidig xili ciyaareedkii uhoreeyey ee uu ka ciyaarro premer legue xili ciyaareedkii keliyaata ee uu joogay wuxuu soo bandhigay qaab ciyaareed aan weli kasoo badhigin ciyaar yahan
sidoo kale wuxuu noqday gool dhaliyihii ugu goolasha badnaa hal xili ciyaareed .
sidoo kale waxa uu noqday ciyaar yahankii ugu goolasha badnaa tartamada oo dhan.
sidoo kale waxa uu soo gaadhay final champions legue walow dhaawac cadow tinimo ah soo wajahay
intaanu dhaawacmin waad dareemaysay saamaynta ciyaartuy say ahayd , iyo dhaawaciisii kadib siday isu bedeshay.
sifooyinkaas ayaan ku doortay